Kuhle yekudla kwema-European UMichelin Umhlahlandlela | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > Kuhle yekudla kwema-European UMichelin Umhlahlandlela
(Kugcine ukubuyekezwa On: 18/03/2022)
The Best yokudlela European UMichelin Umhlahlandlela inikeza esihle ukuba uhlela uhambo isitimela emhlabeni Europe. I UMichelin Umhlahlandlela manje izipesheli Abantu baseYurophu ukukhethwa izindawo zokudlela namahhotela e 38 amadolobha aseYurophu. emadolobheni ezintsha ezintathu ziye ukungezwa kule 2019 uhlelo: Zagreb futhi Dubrovnik, Croatia, noReykjavik, Iceland. Engaziwa abaqeqeshiwe abahloli ukuvakashela bese ukhetha zokudlela ngesikhathi kufakwa lodumo UMichelin ukudla ukulinganiswa uhlelo futhi asebenzise inqubo efanayo ngoba amahhotela. Umphumela: uhla izikhungo Kunconywa wonke umuntu futhi amabhajethi.
Abavakashi angaqiniseka sithembele ku UMichelin khaphi ukwenza kwabo uhambo ngesitimela ukuthi okumnandi okuningi! Sithole ayisesemikhulu phansi Kuhle yokudlela European UMichelin Umhlahlandlela, futhi yebo, kuqinisekiswe ukuthi yonke indawo yokuma kalula efinyeleleka zemininingwane!
Uliassi, elise Senigallia ku-Italy Adriatic, ekugcineni inezinkanyezi zayo ezintathu ebezilindelwe isikhathi eside ngemuva kokuchitha iminyaka eminingana ezingeni lezinkanyezi ezimbili.
Ngokwe-blog yokudlela Fine Ezokudla Lovers. Qalisa ngudadewabo nethimba umzalwane CATIA futhi Mauro Uliassi, yokudlela ibeka focus esindayo kwasolwandle futhi unikeza kokubili amamenyu ngokunambitha kanye la Carte yokudlela. Uliassi manje ungomunye abayisishiyagalolunye ezintathu-star zokudlela e-Italy. Lokhu kusho ukuthi zonke ezintathu-star ngonyaka odlule izindawo zigcinwe isimo sabo, kufaka phakathi indawo yokudlela eyaziwa ngeModena Osteria Francescana.
Kukhona inala izitimela salibangisa London ngezikhathi ezihlukahlukene kulo lonke elaseYurophu. Head GcinaATrain ukubhuka ithikithi ngemizuzu yokubheka i-grub enhle kakhulu!
Kuhle yokudlela European Michelin Umhlahlandlela: I-Netherlands
Abase Netherlands (noma Holland) yizwe elincane eligcwele izithombe ezidume umhlaba wonke. Beautiful isibani Amasimu, windmills, ushizi izimakethe, lokhuni izicathulo, emiselekazini Amsterdam, yobuciko of Old Masters, Delft Blue sobumba, ezintsha amanzi-ukuphathwa, nezigidi ze amabhayisikili. Futhi ukubonga ubuhle ukuze amabhayisikili. I 2019 Umhlahlandlela weMICHELIN weNetherlands unenani eliphelele le- 571 zokudlela kanye 263 amahhotela. Uya kudingeka Amazing.
Amsterdam Central Station iyisiteshi sesitimela esikhulu futhi iyinhliziyo yangempela yedolobha: central hhayi kuphela ngegama, kodwa futhi njengoba enkulu ezokuthutha zomphakathi indawo ukudluliswa, ngakho-ke kungaba yindawo enhle sikhwele isitimela kakhulu.
Ine- indawo yemakethe yokudla ukuthanda, kodwa zokudlela Michelin Star akuzona labo miss noma!
Madrid has emhlabeni 3,100 zokudla, kodwa bakhethiwe futhi bambalwa baye yaklonyeliswa lenkanyezi edumile UMichelin Umhlahlandlela. Bangu 16 zokudla e Madrid ewina UMichelin izinkanyezi: DiverXO (izinkanyezi ezintathu); Santceloni, La Terraza del Casino, Sergi Arola, URamon Freixa Madrid futhi El Club Allard (izinkanyezi ezimbili); futhi Kabuki, Kabuki Wellington, DSTAgE, Albora, Imbuzi kanye Punto MX (inkanyezi eyodwa). Ngaphezu kwalokho, emaphethelweni edolobha, indawo yokudlela eyodwa (igobolondo) has izinkanyezi ezimbili futhi kukhona ezintathu eyodwa inkanyezi zokudla: Casa Jose, Chiron, noMontia. Bonke bakhonza ukudla emhlabeni-class futhi banikele inkonzo enhle kakhulu.
Indalo of Chef David Munoz babe gourmets umxhwele emhlabeni wonke. thunzi, isibindi, nobuciko kuyisihluthulelo sempumelelo ye-DiverXO. imenyu Le ndawo yokudlela sika izinguquko isizini, kodwa has ngamathemba amabili kuphela. I Imenyu XOW futhi Imenyu Glotón XOW. Womabili amamenyu ahlinzeka ngokudla okufanayo futhi ahluka kuphela ngobuningi namanani.
Ukuthola Kukhona: Indlela engcono kakhulu yokuthola kulokhu kukhetha Best yokudlela yaseYurophu ngu Metro bese kokwehla e Tetuan Station (Umugqa 1).
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi ungene kusayithi lakho, ungakwazi noma ukuthatha izithombe zethu nombhalo bese nje ukusinika credit ne isixhumanisi kulokhu okuthunyelwe ibhulogi, noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-european-restaurant-michelin%2F%3Flang%3Dzu - (Skrolela phansi ukuze ubone Shumeka Ikhodi)
#michelin	#Michelinstar	#abase-Netherlands	Ukudla	phungingland	imvuenline	travelitaly	travelnetherlands	uhambo lokuhamba